Thailandy: Mandefa Mivantana Ny Fanonganam-panjakana Ho Anaty Bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Janoary 2018 12:04 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny Septambra 2006)
Farafahakeliny blaogy roa no napetraka mba handrakofana fotsiny ny fanonganam-panjakana ataon'ny tafika izay mitranga ao Thailandy – 19sep, blaoginà vondrona iray izay amin'ny fiteny anglisy sy ny revolution.blogrevo (efa tapaka ny rohy mankamin'ity farany) izay amin'ny fiteny thaï.
Nivoaka teo amin'ny YouTube ireo dika mitovin'ny lahatsarin'ireo filazàna fanonganam-panjakàna. Inty ny filazàna voalohany nalefa tamin'ny fahitalavitra ny fandraisana fahefana nataon'ny tafika.
Misy koa pikantsarin’ny filazàna tamin'ny fahitalavitra momba ireo “baiko voalohany sy faharoa nataon'ny Democratic Reform Coucil”, fikambanana iray mbola tsy fantatra hatreto sy ny anarana nampiasain'ny tafika izay naka ny fifehezana an'i Bangkok.
Asehon'ny fikarohana iray tao amin'ny tranonkala fifampizaràna sary flickr ampiasàna ny teny fanalahidy “fanonganam-panjakana” ny sary efa ho 100 avy any Thailandy nalefa tao anatin'ireo 24 ora farany avy tamin'ireo sarin'ny tafika vonona manerana an'ireo lalamben'i Bangkok.
[Sary an'i goshen42]..ho porofo hita maso mikasika ny fibahanana an'ireo fantsona fahitalavitra vahiny mandeha amin'ny alalan'ny tariby.
[Sary an'ny kengz]Ny solaitrabe fampitambaovao 2Bangkok.com dia manana pejy iray havaozina matetika natokana ho an'ireo trangana fanonganam-panjakana mitranga amin'izao fotoana izao: Fiakaran'ny tosi-drà ao Thailandy, saingy ny lahatsoratra vao haingana indrindra ao mampitandrina fa manomboka tena mihisatra be ireo fidirana amin'ny aterineto.